चितवनमा बर्ड फ्लुकाे अाशंका, हप्तादिनमा ४ हजार कुखुरा मरे
Home जीवनशैली चितवनमा बर्ड फ्लुकाे अाशंका, हप्तादिनमा ४ हजार कुखुरा मरे
चितवन, चैत २२ – चितवनको रत्ननगर १५ माधवपुरको एक कुखुरा फर्ममा हप्ता दिनमा ३ हजार ७ सय कुखुरा मरेका छन् । लामिछाने पोल्ट्री फर्मको ४ वटा खोरका कुखुराहरु अचानक मर्न थालेपछि आफ्नो कुखुरामा बर्ड फ्लु लागेको हुनसक्ने सो फर्मका सञ्चालक अमृत लामिछानेले बताए । सो लामिछाने पोल्ट्री फर्म द्रोण प्रसाद लामिछानेको नाममा दर्ता भएपनि फर्मको सबै कारोबार उनका कान्छा भाइ अमृत लामिछानेले हेर्दै आएका छन् ।
विगत ८ वर्षदेखि कुखुरा पाल्दै आएका लामिछानेको फर्ममा यति ठूलो मात्रामा लेयर्स कुखुरा मरेको थाहा पाई आज बिहिबार दिउसो १ बजे जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख चेतनारायण खरेल र पशु चिकित्सक डा. विकाश श्रेष्ठ सोही फर्ममा पुगेका थिए । कुखुराको खोरको अवलोकन पछि कार्यालय प्रमुख खरेलले छोटो समयमा यति धेरै मात्रामा कुखुरा मर्नुले बर्ड फ्लुको आशंका भएपनि ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट नआई भन्न नसकिने बताए । त्यस्तै पशु चिकित्सक डा। विकाश श्रेष्ठले पनि आशंका भएको छ तर रिपोर्ट आएपछि यथार्थ भन्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
गत चैत्र १५ गते बेलुका हावाहुरी आएपछि साझ ३ वटा कुखुरा मरेको सञ्चालक अमृत लामिछानेले बताए । १६ गते बिहान उठेर खोरमा जाँदा १४ वटा कुखुरा मरेको देखेपछि उनले काम विशेषले काठमाडौं गएका दाइ द्रोण लामिछानेलाई फोन गरे । दाइको सल्लाह अनुसार उनले तत्काल कुखुराको परीक्षणको लागि भरतपुर पुगे । १६ गतेको पशु सेवा कार्यालयको रिपोर्टमा ‘एआइभी पोजिटिभ’ रिपोर्ट देखिएको थियो । सो रिपोर्ट कुनै रोगको लक्षण हो भन्ने थाहा पाएपछि थप परीक्षणको लागि काठमाडौ पठाउनुपर्ने थियो । उनीहरुले पठाइदिएनन्, लामिछानेले दुःखेसो गरे ।
मैले पटक पटक काठमाडौको रिपोर्ट नआएको गुनासो गरेपछि सुनुवाई भएन । त्यसको लगत्तै मैले पुनः चैत्र २० गते भरतपुरमा नै कुखुरा परीक्षणको लागि स्याम्पल लिएर गएको थिए, उनले भने । त्यतिखेर खोरमा करिव १ हजार ५ सय कुखुरा मरिसकेका थिए, लामिछानेले भने । त्यस दिनको रिपोर्टमा पनि पहिलाको जस्तै पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि बल्ल परीक्षणको लागि जिल्लाबाट स्याम्पल काठमाडौ पठाइएको थियो, उनले भने । पटक पटक हामीले जिल्ला पशु सेवा कार्यायलमा निरीक्षणको लागि अनुरोध गर्दा पनि यसतर्फ सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे । आज वहाँहरु निरीक्षणमा आउँदा ढिलो भइसकेको थियो । करिब करिब सबै कुखुराहरु सकिने अवस्था थियो ।
२ पटकसम्म १६ गते र २० गते भरतपुर स्थित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा परीक्षण गरिएको रिपोर्टबाट कुखुरामा ‘एआइभी पोजिटिभ’ देखिएको थियो । सो रोग देखिएपछि काठमाडौ पठाइएको स्याम्पल छिटो छिटो भन्दा परीक्षण गर्न पटक पटक काठमाडौं स्थित कार्यालयका प्रमुख डिकरदेव भट्टलाई पटक पटक फोन गरेको सञ्चालक द्रोण प्रसाद लामिछानेले बताए । आजपनि धेरैपटक मैले फोन गरे, ३ बजे दिउसो आउने भनेको रिपोर्ट आएको छैन, १ हप्ता भयो खोरको कुखुरा मरेर सकिइ सक्यो, उनले भने । – संकल्पबाट साभार
Previous articleपशुपंक्षीको बीमा रकम कम्पनीले दिन नमानेको किसानको गुनासो
Next articleवर्डफ्लु के हो ? यस्ता हुन्छन लक्षण, यी हुन् रोकथामका उपाय ।